ကားကလေး တို့ အားကိုးရာ Automan ( Quick Service Center)
မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် မူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲလာခြင်းနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မော်ဒယ်မြင့် ကားအမျိုးစားများနှင့်အပြိုင် ခေတ်မှီ နည်းပညာများပါရှိသည့် ကားအမျိုးစား ပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို ခေတ်မှီ ကားအမျိုးစားများစွာကို အမြဲ တမ်း ကြည့်ရှုလေ့လာ စစ်ဆေး ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Service Center တွေ ကလည်း လိုအပ်နေပါပြီ။
ဒါဆို ဘယ် မှာ စစ်ဆေးကြမလဲ။ .. ?
ဒီတစ်ပတ်မှာ တော့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ကားလောကသားတွေအတွက် မိမိကားလေးတွေကို စိတ်ချလက်ချ အပူအပင် မရှိ သွားလာ မောင်းနှင် နိုင်အောင် အစဉ်မပြတ် ကြံ့ခိုင်ရေး စစ်ဆေးပေးနိုင်မဲ့ ခေတ်မှီ ကားဆေးခန်း လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ။ ဆိုင်လေးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်၊ အထက် ပန်းဆိုးတန်း လမ်းမပေါ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ Automan ( Quick Service Center) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်လမ်းကြော ကျပ်တည်းမှုကြောင့် တစ်နေရမှ တစ်နေရာ ခုန်ကူးနေ မဲ့ အစား တစ်နေရာတည်း မှာပင် ကားကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကုန်ပြီးမြောက် သွားအောင် Automan က ကူညီပေးနေပါတယ်။ ကားတစ်စီးလုံး ခေါင်းမှ အစ ခြေဖျားအထိတိုင် နည်းပညာမြင့် ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးပေးမည့်အပြင် နာမည်ကြီး Brand အမျိုးစားတွေကို်သာ အဓိကထား အသုံးပြုနေတဲ့ Quick Service Center လေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကားဈေးကွက် က Japan နိုင်ငံထုတ် ကားတွေကို အစပျိုးပြီး ဖြစ်တည်လာတာပါ။ ဒါကြောင့် Janpan ထုတ်ကားတွေကို သာ အဓိက စစ်ဆေး နိုင်ပေမဲ့လည်း ဥရောပ နဲ့အမေရိကန် အပြင် အခြားနိုင်ငံ ထုတ်ကားများအတွက် ပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင် Automan ကနေ လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်။ Spare parts အနေနဲ့ ကလည်း ပြည်က ကုမ္ပဏီ ကြီးများကနေ တိုက် ရိုက် မှာယူမှုတွေ ရှိသလို ရန်ကုန် ကားဈေးကွက်အတွင်းမှာ လက်ခံမှုရရှိ ထားသည့် တရားဝင် တင်သွင်းသူများထံမှ လည်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ အသုံးပြု နိုင်သည့် ဝန်ဆောင် မှုများကိုပါ Automan ကနေ ရန်ကုန်မြို့နေထိုင်သူ ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုတွေ Automan service center မှာ ရရှိနိုင်မှာလဲ...?
Automan service center အနေနဲ့ကတော့ လာရောက် ပြုပြင်သူ customer တွေ အချိန်ကုန်ဆုံးမှုမရှိစေရန် တစ်နေရာတည်းမှာပင် အပြီးပြတ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။ ယင်းအပြင် Automan (Quick Service Center) မှာရရှိနိုင်မဲ့ အဓိက ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့-
တာယာပြုပြင် လဲလှယ်ခြင်း ( လေပေါင်ချိန် ပြည့်ဝမှု ရှိမှ Steeringကို အကောင်းမွန်ဆုံး တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းကျောင်းနိုင်မှာပါ )။
စက်ချောဆီ လဲလှယ်ခြင်း( အင်ဂျင်ဝိုင်၊ ပါဝါဆီ၊ ဘရိတ်ဆီ၊ Auto ဆီ၊ ဂီယာဝိုင်၊ နဲ့ ကရောင်းဝိုင် အစရှိသည့် စက်ဆီများ.)
ကားရေဆေးခြင်း ( Quality ကောင်းမွန်တဲ့ EU ထုတ်စက်ပစ္စည်း တွေနဲ့သင့်ကားလေးကို ရေဆေး၊ စက်ပေါ်လစ် တင်ပေးသွားမှာပါ)
Battery စစ်ဆေး လဲလှယ်ပေးခြင်း ( Battery ကောင်းနေမှ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လှုပ်ရှားနိုင်မှာပါ)။
လေအေးပေးစက် ပြုပြင်ခြင်း ( မိုးရာသီ အတွက် အဆင်ပြေပေမဲ့လည်း နွေရာသီ အေးချမ်းဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်။)
ကား အောက်ပိုင်း ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း (ခရီးမထွက်ခင် မိမိ ကားအောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးကို သတိမမေ့လျော့ဘဲ စစ်ဆေးပေးပါ။)
ဘရိတ်ရှူး ပြုပြင် ခြင်း။ (ဘရိတ် ရှူးကို သတိမေ့လျော့ခြင်း မရှိပါနဲံ။ စစ်ဆေးပေးပါ)
Spark Plug လဲလှယ်ခြင်း (အရည်သွေးနိမ့် စက်သုံးဆီ တွေ ကြောင့် Plug လဲလှယ်ပေးနေရတာ ကားပိုင်ရှင် တို့အတွက် အစဉ်လာလိုမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ။ Plug အတွက် စိတ်ပူမနေပါနဲ့တော့)
အစရှိသည့် အကောင်းမွန်ဆုံးသောဝန်ဆောင်မှု တွေကို ကွန်ပြူတာ စနစ်အသုံးပြုပေးတဲ့ Automan ( Quick Service Center) မှာ ရရှိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Polish & Coating- နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြော ရမယ်ဆိုရင် မိမိကား ကို အရောင် တောက်ပြောင်စေဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင် တဲ့ ပညာရှင် တွေအပါအဝင် နာမည်ကြီး ပေါလစ်ဆေးတွေကို အဓိက အသုံးပြုတဲ့ နေရာမျိုး ကို ရွေးခြယ်သင့်ပါတယ်။ ကားတစ်စီး သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ရာမှာ သာမာန်ဆပ်ပြာ မှုန့်တွေကို အသုံးပြု ဆေးကြောမယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ ကားအရောင် မှေးမိန်လာတတ်ပါတယ်။ Automan မှာကတော့ Poland နိုင်ငံမှာ အဓိက အသုံးပြုနေကြတဲ့ K-2 ကားဆေးဆပ်ပြာ အဆီကိုသာ တင်သွင်း အသုံးပြု ပေးတာကြောင့် တိုက်ချွတ်ဆေးကြောခြင်းအတွက် စိတ်ချရစေမှာပါ။
Coating- ဆိုတာ နေရောင်ခြည် နဲ့ ဆပ်ပြာတို့ကြောင့် ဆေးသားပျက်စီးမှုတွေကနေ အပြည့်ဝကာကွယ် ပေးနို်င်တဲ့ ကားဘော်ဒီအပေါ်ရှိ အလွှာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကာကွယ်မှု တွေပါဝင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို လည်း Automan မှာ ရရှိအသုံးပြုနိုင်နေပါပြီ။
Automan မှာ အဓိကအားဖြင့ဥရောပအမျိုးအစား ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ Shell Helix နှင့် Kixx GS Oil lubricants များကို အသုံးပြုနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Automan service center မှာ ကား check-up လုပ်ဆောင်ခြင်းကို အင်ဂျင်ပါဝါအပေါ် မူတည်ပြီး အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ အင်ဂျင်ပါဝါ –
– 660 CC မှ 1000 CC အထိကို 15,000 ကျပ်
– 1000 CC မှ 2500 CC အထိကို 20,000 ကျပ်
– 2500 CC နှင့်အထက်ကို 30,000 ကျပ်
– V8 တွေအတွက် ကိုတော့ 40,000 ကျပ် အထိ အထူးလျော့ဈေးတွေနဲ့ Automan ဆီမှာ ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Check-up လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတူ 3D အလိုင်းမင်း စစ်ဆေးခြင်းကိုပါ အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အနေနဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Automan (Quick Service Center) နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကားချစ်သူတို့ ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်း နဲ့ ကားလေးတွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး သွားရောက် စစ်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့
No(75/77), အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့- Phone Number- 01 374953, 09 258607940 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
No(331/332/333), သစ္စာလမ်း၊ ၉ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့- Phone Number- 09 26240 5457 တို့မှာ သွားရောက်စုံစမ်းပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
နေပြည်တော် တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ဆိုင်ခွဲ လိပ်စာကတော့-
Junction(နေပြည်တော်)၊ ဟိုတယ် ဇုန်၊ ရာဇသင်္ဂဟ လမ်းမကြီး၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်-Phone Number – 09 767166169 တို့တွင်သွားရောက်စစ်ဆေးပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
Tan Chong Motor Myanmar မှ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ ဝယ်ယူထားသော Nissan Sunny ကားများအား အပ်နှင်း
ခရီးသည် အတက်အဆင်း တံခါးတစ်ပေါက်ရှိ ကားများ ယာဉ်အကူ ထားရှိမည်